Git Sangit News » सम्भोग गर्दा पुरुषलाई बढी पि’डा कि महिलालाई जानिराखौ ?
सम्भोग गर्दा पुरुषलाई बढी पि’डा कि महिलालाई जानिराखौ ?
दुनियाँभरीका युवाअवस्था विताइरहेका युवती हरूको एउटै स’त्य छ, चाहे ती बिकट गाउँका हुन् या आधुनिक सहरमा बस्ने केटी हुन् ।भिन्न भिन्न पृष्ठ’भूमिका भए पनि यी सबैको बीचमा एउटा कुराको समानता छ । युवा अवस्थामा प्रवेश गर्ने समयमा यी युवतीहरूमा यौ’न सम्बन्धलाई लिएर सम्भोगको समयमा दुख्छ भन्ने धारण विकास हुन्छ ।
यौ’न सम्बन्ध राख्दा र’गत बग्न सक्छ भन्ने पनि मनमा ड’र रहन्छ । यौ’न सम्बन्धी सरुवा रोगसँग पनि जुध्नुपर्ने हुनसक्छ । यति मात्र होइन, गर्भ’वती हुँदा यु’वतीहरूले अनेक पी’डा पनि भोग्नुपर्छ । यद्यपि प्रसवका समयका कै’यौँ युव’तीका भि’डियो हामीले देखेका छौं, जसमा उनीहरू अलिकति पनि करा’एको छैनन् । तर यी सबै विषयलाई लिएर आ’शङ्कका कम भएको पाइँदैन ।
अर्कोतर्फ के’टाहरूलाई यौ’नका विषयमा यस्ता कुरा हुँदैनन् । उनीहरू उ’त्तेजना र आ’र्गेजमको कुरा गर्छन् । उता के’टीहरूको मनमा यौ’नको विषयलाई लिएर कै’याै‌ किसिमका भ्र’म र ड’र हुन्छन् । यसकारण यौ’न स’म्बन्ध एक पक्षका लागि श’ङ्काको विषय हुन्छ । महि’लाहरू दुक्छ नै भन्ने मान्छन् तर यस्तो दु’खाइ पहिलो पटक से’क्स गर्दा मात्र हुन्छ भन्ने हुँदैन ।
२४ वर्षकी जे’स भन्छिन्, स’म्भोग ग’र्दा पी’डा र उदा’सिनताबाट कसरी बँच्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाह छैन ? उनले भनिन्, ‘मैले यौ’नको बारेमा जे सु’नेकी थिएँ, त्यसबाट धेरै त’नाव भयो । म धेरै सतर्क थिए । म आ’र्गेजमलाई लिएर कै’यौँ धारणाले ग्रस्त थिएँ । मलाई जे भनिएको थियो, त्यसमा यौ’न सम्ब’न्धको समयमा पनि मु’क्त हुन सकिनँ ।
मलाई के भनेका थिए भने स’म्भोगको समयमा दु’ख्न सक्छ र मैले नचाहेर पनि स्वीकार गर्नु पर्यो ।’ उनले भनिन्, ‘मैले एक स’तर्क र शिष्ट पा’टनरलाई छानेँ । यसको साथै मैले शा’रीरिक स’म्बन्धलाई लिएर अफै केही चे’कजाँच गरेँ । यदि तपाईंको पाट’नर ठीक छ भने दुखाइ भन्ने कुरा झु’टो हो ।’यु’ट्युव च्या’नलमा स’म्भोगसँग सम्बन्धित सबै कुरामाथि च’र्चा गर्छिन् । यौ’न सम्बन्धमा दु’खाइको विषयमा उनको भ’नाइ छ, ‘कैयौँ महिलाहरू स’म्भोगको समयमा दु’खाइको सा’मना गर्नुको का’रण स’म्भोगमा दु’खाइ नै नि’हित हो, बरु हामीलाई राम्रो यौ’न स’म्बन्ध कसरी हुन्छ भन्ने जान’कारी नभएर यस्तो हुन’सक्छ ।
सम्भोग’मा कैयौँ अवस्था दर्द’नाक हुन्छन् । शारी’रिक सम्बन्धको समयमा तपाईंले दु’खाइको सामना गर्नु पर्यो भने ग’म्भीर समस्या उत्पन्न भयो । रा’यल कलेज अफ आ’ब्सिटट्रिसन ए’न्ड गाइ’नोकोलजिस्टकी प्रवक्ता स्वाति’ झा भन्छिन्, ‘भर्जि’निटीमा दुखा’इ कोप’रिएर र एसटी’आइको कारण हुनसक्छ । कैयौँ पटक ले’टेक्स क’न्डम र सा’बुनका कारण पनि पोलिन्छ ।’ स्वा’ति झा’को भनाइ के छ भने स’म्भोगका समयमा दुखे’मा से’क्सुअल हे’ल्थ क्लि’निकमा गएर ज’चाउनु पर्छ ।
यद्य’पि युनि’र्भसिटी अफ ग्ला’स्गोका सिनि’यर रि’सर्च फे’लो डा. क्रि’स्टिन मिसेल भन्छिन्, सम्भो’गमा दुखा’इको सम्बन्ध पूर्ण रूपमा म’नोवैज्ञानिक तथा सामाजिक कारणले गर्दा हो । क्रिस्टि’नले २०१७ मा एउटा अध्ययन गरेकी थिइन् । यसमा बेलायतमा १६ देखि २४ वर्षका युवतीहरूमा १० प्रतिशतलाई से’क्समा दुखा’इको सा’ना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा समावेश थियो । उनले भनिन्, ‘यदि एउटी तरु’नी महिलाले चाहेजस्तो सम्भो’ग गर्न नपाउँदा, मन लगाएर नगर्दा, खुलेर कुरा गर्न नस’क्दा वा आ’नन्द मानेर नगरेको अवस्था स’म्भोग पी’डादायी हुन्छ ।
स’म्भोगमा आ’नन्दको अधिकार बराबरी होइन अथवा कम हो भन्ने महिलाहरूमा एक किसमको पू’र्वाग्रह हुन्छ । कै’यौं महिला कुन रूपमा स्वीर्काछन् भने उनीहरू महिला हुन्, त्यसैले स’म्भोग गर्दा पी’डा हुन्छ ।’ अमेरिकामा एउटा अध्ययन भयो । यस अध्ययन’की रिस’र्चर सारा म्या’कलै’न्डले महिला र पुरुषलाई उनीहरूको लागि स’म्भोगको समयमा कम सन्तु’ष्टिको अर्थ के हुन्छ भनेर सोधे’की थिइन् । यस प्रश्नको उत्तरमा पु’रुषहरूको जवाफ पा’टनरको उदा’सीनता भन्ने थियो भने महिला’हरूको जवाफ दुखाइ भन्ने थियो । किम लो’लियाले पनि यस्तै अनुभवहरूको सा’मना गर्नुपरेको थियो ।
अहिले उनी महिला’हरूको बीचमा यस्तो ड’र र स’मस्याको समधान गर्ने काम गरिरहेकी छिन् ।लो’लिया लन्ड’नस्थित से’क्स एजु’केसन सर्भि’सकी संस्था’पक हुन् । यसका साथै उनी एउटा अन’लाइन म्याग्जि’न पनि निकाल्छिन् । उनको बुझाइ के छ भने अस’हज बनाउने स’म्भोग आवश्यक छैन चाहे त्यो शारी’रिक सम’स्याबाट होस् वा उनी चुप रहँदाको कारणले होस् । किम भन्छिन्, ‘महिलाहरू पी’डा मह’सुस भएको बेला चुप’चाप सहन्छन्, उनीहरू बो’ल्दैनन् । पी’डा भए पनि नबो’ल्नुमा कि उनी आफैमा कुनै न कुनै समस्या छ भनेर कि आफ्नो पा’टनरले अन्यथा न’सोचुन् भनेर डरा’एका हुन्छन् । से’क्सको स’मयमा पा’रस्परिक, क्र’मशः र एकअ’र्कोलाई बुझ्ने र महसुस गर्न ला’यक बन्नु पर्छ ।’
प्रकाशित मिति १८ पुष २०७६, शुक्रबार ०७:१९